DAAWO: ”Xitaa haddii aysan doorasho dhicin dad baan qixinaynaa war maaha!” | Hadalsame Media
Home Wararka DAAWO: ”Xitaa haddii aysan doorasho dhicin dad baan qixinaynaa war maaha!”
DAAWO: ”Xitaa haddii aysan doorasho dhicin dad baan qixinaynaa war maaha!”
(Muqdisho) 10 Nof 2019 – Siyaasiga Cabdullahi Sheekh Xasan oo mucaaradka ka mid ah ayaa dhaliilay wararka ay adeegsanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah qaarkood.
Md Cabdullaahi Sheekh ayaa madaxdii hore ku dhaliilay inay aalaaba saxayaan khaladaad ay laftoodu horay u geli jireen, isagoo cambaareeyay qaabka ay u hadleen siyaasiyiinta qaar.
”Dastuurka waxa hadda ku qoran horayna waa ugu qornaayeen!” ayuu yiri Md Cabdullaahi oo ka mid ah madaxda axsaabta oo soo qaatay khaladaad dastuuri ah oo horay u dhici jirey, isagoo soo qaatay dad badan oo qaab khaldan loo xirey xilligii xukuumaddii hore.
”Haddii ay doorasho dhici weydo sax maahan in aan dadka qax u diyaarinno. Waa inaan xal keennaa, waa inay Dowladdu xal keentaa!” ayuu yiri.
Previous articleHal meel oo ay ka DHIMATAY dhibna ugu filan xukuumadda haatan jirta! (Dhacdada Garoonka?!!)
Next articleCiidamo hor leh oo kusoo biiray Ciidamada Xoogga Dalka Somalia